Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1 | Androidsis
Amin'ny lahatsoratra manaraka, na firy Samsung namana fa izy ireo dia natao hivarotana terminal Android vaovao fotsiny nefa tsy miraharaha ny serivisy aorian'ny varotra omena an'ireo mpampiasa izay natoky azy ireo an-jambany rehefa mahazo terminal Android vaovao, hampianatra azy ireo aho noho ny asa avy amin'ireo mpamorona mahaleo tena toa ny ekipa Remix Resurrection, ny lalana marina mankany manavao ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1 Lollipop.
Raha nahare tsara ianao dia tsy mila mamerina mamaky ny lohatenin'ilay lahatsoratra hatrany hatrany na manosotra ny masonao mieritreritra fa nofy izany. Noho ny fampandrosoana mavitrika ny maro, androany dia afaka milaza aminao aho fa ny Samsung Galaxy S3, modely GT-I9300, afaka mihazakazaka tonga lafatra izy ity izay ny daty farany misy ny Android ofisialy farany. Ka fantatrao, raha tianao havaozy ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop 5.1.1, kitiho eo «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity» satria hazavaiko tsikelikely aminao izany, amin'ny antsipiriany be dia be ary apetaho ireo rakitra sy fampianarana ilaina rehetra mba ho tsotra sy mazava araka izay azo atao ny fizotry ny fanavaozana.
1 Endri-javatra momba ny Resurrection Remix Android 5.1.1 Lollipop rom
4 Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1. Lollipop tsikelikely
5 Fomba fanavaozana raha efa ao amin'ny kinova Resurrection Remix Lollipop teo aloha isika.
Endri-javatra momba ny Resurrection Remix Android 5.1.1 Lollipop rom
La Rom Resurrection Remix Lollipop afaka mirehareha amin'ny ho iray amin'ireo ROM Android 5.1.1 feno indrindra amin'ny fivoarany, ary ity tsimbadika namboarina tamin'ny Android 5.1.1 ity ary namboarina tsara ho an'ny Samsung Galaxy S3 dia mifototra amin'ny asan'ny Rom maro hafa manambatra ny tsara indrindra amin'izy rehetra ho iray. Azontsika atao koa ny milaza fa ny Resurrection Remix dia miorina amin'ny Cyanogenmod, AOKP, ParanoidAndroid, OmniRom ary na dia Rom Rom.
Manaova Samsung Galaxy S3, maodely iraisam-pirenena GT-I9300 izay tsy maintsy ho Miorim-paka ary manana ny fanamboarana novaina.
Manana backup, nandroid backup ny rafitra miasa rehetra ankehitriny.
azo atoro backup ny apps sy data rehetra satria amin'ny dingana fanavaozana dia hamoy azy ireo isika.
Ny rakitra ilaina dia voafetra amin'ny rakitra roa voageja ao anaty format zip, izay tsy maintsy hataontsika misintona ary kopia amin'ny fahatsiarovan-tena anatiny sy ivelany an'ny Samsung Galaxy S3 tsy misy famongorana:
Rom Resurrection Remix V5.4.0 Android 5.1.1. Lollipop ho an'ny Samsung Galaxy S3 GT-I9300.
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1. Lollipop tsikelikely
Raha vantany vao tratra ny fepetra ilaina rehetra dia alaina ny rakitra ary alaina nefa tsy decompressing amin'ny Samsung Galaxy S3 tadiavinay havaozina amin'ny fomba ofisialy fanampiny mankany amin'ny Android 5.1.1 Lollipop, Hiditra amin'ny fomba fanarenana izahay ary hanohy toy izao:
Fafao feno: Ampidiro ny safidy Hamafana ary manao Wipe iray manontolo ho an'ny fametrahana iray madio araka izay azo atao izahay, lojika ny Hamafa irery izay tsy tokony hataontsika dia ilay mifanaraka amin'ny fahatsiarovana anatiny na ivelany arakaraka ny toerana nampiantranoanay ireo fisie ilaina amin'ny fampidirana ny Rom.
Mandeha amin'ny safidy isika hametraka ary mifantina ny Zip an'ny Rom izahay ary manamafy ny fiparitahany.
Miverina amin'ilay safidy isika hametraka ary amin'ity indray mitoraka ity dia manazava ny zip-n'ny Gapps Android 5.1.1 ..
Farany dia mifidy ny safidy isika Atsaharo ny rafitra ankehitriny.
Fomba fanavaozana raha efa ao amin'ny kinova Resurrection Remix Lollipop teo aloha isika.
Raha efa ao anaty a kinova fanombohana ny Rom Resurrection Remix, ny fomba fanavaozana ny kinova farany misy dia voafetra amin'ny, avy amin'ny Recovery, araho ireto torolàlana manjelatra ireto:
Mandeha amin'ny safidy Install izahay ary mampandeha ny Rom sy ny Gapps.
Hamafa cache ary hamafana cache cache dalvik.
Amin'ity rafitra ity dia havaozina amin'ny endriny farany farany ny Rom, mitahiry ireo rindranasa sy data rehetra ao aminay.
Sary bebe kokoa eto
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fanavaozana ny Samsung galaxy S3 amin'ny Android 5.1.1
Guillermo Be dia hoy izy:
Ary ny xiaomi redmi note 4g. Mbola tsy azo havaozina sa tsy izany?
Valiny tamin'i Guillermo Be
Ao amin'ny v5 izy amin'izao fotoana izao
Misaotra, misy tutorial eto momba ny fomba fametrahana azy?
Mila zavatra hafa ve ianao namana Guillermo Be
haha tsia, misaotra, mbola manaraka ny fantsonao ao amin'ny youtube aho
Mora toy ny misintona ny Rom, mandeha amin'ny fanavaozana, manindry ny menio ambony ary misafidy izay Rom amin'ny fisafidianana fonosana fanavaozana.
matias tatus dia hoy izy:
Ity rom ity dia miasa amin'ny s3 SGH-I747M na galaxy s3 lte
Mamaly an'i tatus matias
Jose جز (@Joe_Squire) dia hoy izy:
Tsara ny tolak'andro, arahaba avy any Mexico, fanontaniana iray ho an'ny Samsung SM-G357M, hanana ny fanavaozana ve ianao?
Valiny tamin'i Jose جوزيه (@Joe_Squire)
Emil dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ity lahatsoratra ity. Nametraka azy aho andro vitsivitsy lasa izay, saingy tsy hitako izay fomba hitazomana azy hanavao hatrany. Tsy mahita na inona na inona ao amin'ny menio fanovana aho. Misy sosokevitra ve?
Mamaly an'i Emil
miguelhd dia hoy izy:
Nanandrana aho omaly, tsy maintsy namaoka sy nametraka indroa ny ROM (ny fotoana voalohany aorian'ny fametrahana azy dia nanome ahy fanidiana) fa tamin'ny fanindroany dia milamina ny zava-drehetra ary miasa tsy misy olana. Estetika misy fanatsarana betsaka, tena tsara. Ankoatr'izay, ny ROM sy ny Lollipop dia samy manome safidy maro sy safidy manokana.
Mikasika ny fampisehoana, ny fampiharana izay somary ara-drariny teo aloha, hatramin'ny fetran'ny azo ampiasaina (Essential Anatomy 3 ohatra) dia miasa ankehitriny be izao. Tsy hiteny aho hoe tonga lafatra, fa lasa mandeha tsara kokoa. AnTuTu dia manome isa 25000 (miaraka amin'ny Android Slimrom 4.4 izay nanome teo amin'ny 19000), na dia matoky ny zava-bita amin'ny fampiharana mihoatra noho izay lazain'ny fitsapana aza aho, izay tsy fantatrao velively raha azo antoka izy ireo na tsia.
Raha fintinina, kely ny fotoana fampiasana fa fahatsapana tena tsara miaraka amin'ity kinova android ity. Raha milamina dia hotehiriziko. Raha tsy izany dia hiverina any Slimkat aho, izay nandeha tsara 🙂 Manome fiainana an-taonany ny S3 noho ny roms mahazatra, tena tsara!
Mamaly an'i miguelhd
Bantha King dia hoy izy:
Azonao omena ahy ve ny fomba anaovanao azy? Amin'izao fotoana izao dia manana ny Galaxy s3 amin'ny loop miaraka amin'ny sary mihetsika hatramin'ny voalohany ...
Misaotra mialoha sy arahaba ...
Valiny tamin'i Bantha King
Ny fotoana voalohany hanombohanao azy dia mety maharitra fotoana lava, izany hoe tsy loopika, fa mety maharitra dimy minitra vao manomboka ... Raha tsy izany dia andramo avereno ny ROM, na, izay nataoko (nanome ahy fanombohana ary novakiako fa tsy maintsy manomboka amin'ny Samsung ROM aho, noho izany dia namerina nametraka ROM stock Samsung 4.3 aho ary avy eo nametraka ny Resurrection Remix)
Williams Leyva dia hoy izy:
Vao nametraka azy aho ary mandeha toy ny manintona, manana fanontaniana iray fotsiny aho….
Fa maninona no miseho ny kisary windows?
Aiza no ahazoako ilay lohahevitra darckRed?
Valiny tamin'i Williams Leyva
Cristina Mejia dia hoy izy:
Ahoana ny fomba anaovako azy ho toy ny Samsung S5 na avo kokoa?
Valiny tamin'i Cristina Mejía
Salama maraina, manana ny maodelin'ny gt-i9300 fotsiny aho ary navotsotra avy tao amin'ny orinasa ny findaiko, tsy mbola namaka na inona na inona aho ary hatramin'ny nijanonako amin'ny Android 4.3 dia te-hanavao ny 5.1 aho nefa tsy fantatro ny dingana farany, ny fomba fanaovana azy, tsy manana horonantsary na rohy hanaraka anao ao amin'ny YouTube ianao na ny fomba hanaovana izany Ankasitrahako ny valinteninao sy ny faharetanao misaotra anao
fangatahana ary apetaho ny zava-drehetra tsy misy olana fa satria lasa faka ato amin'ity efitrano ity aho ... ary inona ny rindranasa azoko alaina ho an'ny radio, ROM tsara be dia be
Fran Dorado dia hoy izy:
Tena tsara tiako ho fantatra raha miasa ho an'ny galaxy s3 Neo koa ity fanavaozana ity?.
Ary raha tsy izany, raha fantatrao ny fomba hanatanterahana azy?
Valiny tamin'i Fran Dorado
Fanontaniana iray, miasa ho an'ny samsung s3 mini GT-I8190L ve izany?
Mijanona ao amin'ny jellybean 4.1.2 aho ary te-hanavao ny kinova farany, inona izany?
Tsara ny tolak'andro, ny fanavaozana an'ity kinova ity dia manova ny modem (base band).
Juanma mendez dia hoy izy:
Salama maraina ... Nandeha tsara ny fametrahana ny ROM saingy manana olana amin'ny gapps aho ... Mahatonga ahy hametraka ny fe-potoana diso 7
Valiny tamin'i Juanma Mendez
Izaho dia manana ny olana mitovy amin'ny famonoana nesorina tamin'ny gapps
Salama, nampiasa ny Gapps of Paranoid Android aho ho an'ny lollipop 5.1 ny micro ampiasaiko; Hitako eto izy ireo: http://www.androidrootz.com/2015/03/download-android-51x-lollipop-pa-gapps.html
1. Voalohany, nijanona ny fangatahana mailaka.
2. Avereno apetraka indray ny zava-drehetra ary tsy mijanona ny fanamarinana ny fifandraisana aorian'ny nampifandraisanao ny WiFi ..
VAHAOLANA MBA MISY
Hadisoana Gapps. Status misy lesoka 7. Misy vahaolana ve?
miguelhd andro tsara apetrako ao aminy ny efitrano, milamina ny zava-drehetra, 3g fotsiny no tsy miseho raha raisiny aho 2g fa 3g, inona no azony natao ary efa napetrako imbetsaka ny efitrano ary nanjavona ny radio dia lazao ahy ny fomba famahavako azy
namana tsara misaotra ny rom nanao ny zava-drehetra tamin'ny taratasy aho fa tsy nanolotra tsy fahombiazana satria fampianarana hafa tsy afaka manavao mihitsy lolipop 5.1 faly aho !!! Tsy mampiseho tsy fahombiazana amin'ny wifi na amin'ny 3g aho na amin'ireo gapps voasedra amin'ny fiarahabana samsung s3 i9300! ary misaotra
Eny, saingy tsy misy radio sy ps efa nampiasako azy nandritra ny iray volana ary somary tsy milamina izy io
azo atao anaty i9305 ve izany?
ISAI PINEDA dia hoy izy:
Mihatra amin'ny maodely SGH-I747
Valiny amin'i ISAI PINEDA
Javier. dia hoy izy:
Salama, mikatona be ny fangatahana fakantsary ary ny Bluetooth miaraka amin'ny fiara sy headset tsy misy tanana, tsy afaka miresaka momba ny tabataba misy izany, mahamenatra izany no antony tsy maintsy hiverenako ...
Valiny tamin'i Javier.
shokyllanos dia hoy izy:
Tsy manokatra ny Gapps ho ahy izy io.
Mamaly an'i shokyllanos
Salama te-hanontany zavatra anao aho, rehefa mamelatra ny ROM dia tsara daholo. Ary rehefa alamiko ihany koa ny zava-drehetra.
Ny olana fotsiny dia tsy manana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa intsony aho. Azonao atao ve ny manampy ahy hamaka? Xq tsy hitako izay vahaolana. Avy sahady dia misaotra betsaka!
Ny sary famantarana ny windows?
Javier Chacon dia hoy izy:
Tapaka ny rohy GAPS, azafady avereno alefa ny rohy, anio tsy feno ny fomba fiasa. Miarahaba anao!
Valiny tamin'i Javier Chacón
Mila vahaolana amin'ny GAPS aho! Manome ahy ny fametahana toerana misy lesoka nesorina 7. Necisto manampy satria tsy vitako ny mamaha azy.
edgar cano dia hoy izy:
Azafady, apetrako amin'ny samsung galaxy s3 i9300 ary maty io rehefa miantso aho, ary koa rehefa handefa hafatra aho, tsy hitako ny hafatra nalefa, inona izany?
Mamaly an'i edgar cano
Salama maraina aho manana Samsung S3 (SGH-I747) hampakatra ny rafitra fandidiana. Inona no tokony hataoko? Raha afaka manoratra ahy amin'ny mailakao ianao dia tiako izany satria tsy manana fiarahabana amin'ny Internet aho
Azo ampiasaina amin'ny s3 neo duos (i9300i) ve izy io?
BENJAMINA dia hoy izy:
ny rohy faharoa dia manome lesoka tsy misy ny pejy
Misaotra !! Nandeha fahagagana an'arivony aho. Manana S3 I9300 iraisam-pirenena aho, nanomboka tamin'ny JB 4.3 Stock of Claro AR. Tsy mila mamerina ny EFS na Modem ianao. Toa tsy zava-dehibe amiko ny zavatra momba ny radio; na dia namaky teo aza aho tao amin'ny forum iray izay misy apk voavaha (ao amin'ny saika ampiasako headphones BT, ka tsy ampiasaiko velively). Tsara ny manazava fa nihatsara ny zava-bita, tsy nisy fanidiana, nohatsaraina ny fampiasana bateria, nohatsaraina indroa ny fandraisana ny famantarana WIFI sy 3G-2G (noho io antony io no namelabelarako an'ity kinova ity izay natolotray ahy namana iray, talohan'ity dia naharitra 2 minitra ary miadana kokoa ny data-ko)
Catriel Pacheco dia hoy izy:
Salama, narahiko ny dingana araky ny nohazavaina tao amin'ny tutorial ary napetraka tanteraka izy io nefa izao tsy manana tambajotra, tsy afaka miantso na mandray antso na mandefa sms na mampiasa data mobile ... misy sosokevitra ve? Misaotra anao
Valiny tamin'i Catriel Pacheco
Jorge Mora dia hoy izy:
Misaotra, tsara izany! Manana olana amin'ny WhatsApp aho. Mametraka azy io fa tsy mandefa ny kaody fanamarinana satria faka izany. misy vahaolana azo atao ve?
Valiny tamin'i Jorge Mora
Salama. Misaotra noho ny fampahalalana, azafady fa nanandrana nanavao ny finday avo lenta finday miaraka amin'ny famantaranao aho sy ireo pejy naroso hafa ary mbola tsy nahita fomba aho hatramin'ny fotoana nametrahako izay rehetra ezahako apetraka avy amin'ny fananganana dia mamoaka lesoka. inona no hitranga? voalohany indrindra, Misaotra.
Salama manana olana aho. Nanaraka ny dingana rehetra aho, fa tsy mihetsika intsony ny findaiko na inona na inona mitranga. Misy afaka manampy ahy?
enstor dia hoy izy:
Miala tsiny fa miasa amin'ny samsung Galaxy S3 Neo Duos GT-i9300i
Mamaly an'i enstor
Salama, nametraka an'ity ROM ity tamin'ny GT-I9300 fotsiny aho dia nantsoina! Ankehitriny dia matetika kokoa izy ireo noho ny tamin'ny nanaovako ny fanaingoana voalohany. Mety olana Gapps ve izany? fiarahabana
Gabriel Atencio dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, tiako ho fantatra raha miasa ho an'ny Samsung GT-I9300 ity ROM ity fa tsy navotsotra, avy amin'ny Movistar Venezuela izy io fa ilay maodelin'ny GT-I9300. Azafady raha misy afaka mamaly ahy.
Valiny tamin'i Gabriel Atencio
Abiel fernandez dia hoy izy:
Tsara fa mila fanampiana aho vao avy nametraka azy ary maharitra iray minitra ary miverina amin'ny sary famantarana ary miverina indray
Valiny tamin'i Abiel fernandez
Vircuemol dia hoy izy:
Salama maraina, fanontaniana aorian'ny fakanako ny fametrahana lolipop 5.1, mila micro SD ve aho? Satria ny S3 lehibe ananako dia manana fahatsiarovana anatiny 16 GB fa eo anelanelan'ny dingana amin'ny fametrahana ity endrika ity dia tsy fantatro raha hamafana izany rehefa ao anaty fahatsiarovan'ny findaiko izany, misy olona manampy ahy azafady! Te hivoaka amin'ity kinova 4.3 ity aho izay maharikoriko
Mamaly an'i Vircuemol
Hiasa ao Venezoela ve ity Android ity?
Leugim dia hoy izy:
Salama daholo, novakiako fa ity rom ity dia ho an'ny S3 GT-i9300 ary tiako ho fantatra raha toa ka mety amin'ny kinova S3 GT-i9305 Amerikanina koa izy, na dia mipetraka any Espana aza aho. Afaka miteny amiko ve ny olona iray raha afaka mampiasa izany amin'ny GT-i9305 aho? dia ny hoe tsy sahy mametraka azy aho raha tsy fantatro na mifanaraka amin'ny findaiko na tsia ary ny marina dia avy amin'izay novakiako dia tiako ny manandrana an'ity rom ity. Misaotra mialoha ary miarahaba antsika rehetra.
Valiny tamin'i Leugim
Rafael cv dia hoy izy:
Ry namako manana sansung sch-i535 aho te-hanavao azy tahaka ny ataoko mba ahafahanao mandefa tutorial ho an'ny mailakao misaotra
Mamaly an'i Rafael cv
Aldo lopez yapu dia hoy izy:
Salama, manana olana amin'ny tambajotra aho, mandeha tsara ny zava-drehetra, saingy tsy afaka miantso na mandefa hafatra an-telefaona na Internet finday aho
Valiny tamin'i Aldo Lopez Yapu
Jd dia hoy izy:
miasa ho an'ny kinova S3 neo duos
Mamaly an'i Jd
Damian Paredes dia hoy izy:
Salama, efa nataoko télécharger daholo fa tsy haiko ny manomboka.
Valiny tamin'i Damian Paredes
Nametraka ny rom an'ny remix lafo vidy aho fa ny gapps tsy mandray ahy, namboarina indray izay azoko apetraka s3 i9300
Ny fampiharana Claudio dia hahantona na hijanona ihany koa, aorian'ny fametrahana ny zava-drehetra, manaova famerenana amin'ny factory manao izany, tsara aho
Meizu M2 Note, 8 cores ary RAM 2 Gb latsaky ny 150 euro
Andininy efatra amin'ny Android M